Garoonka San Siro oo ka dallacay 4.5 gaareyna 5 buuxda! (Maxaa dhacay?) – Gool FM
Garoonka San Siro oo ka dallacay 4.5 gaareyna 5 buuxda! (Maxaa dhacay?)
Raage May 27, 2016
(Milano) 27 Maajo 2016 – Waxaa boorka laga jafaya gegada Stadio Giuseppe Meazza oo habeen dambe marti gelinaya Champions League final isagoo sare u kac ka sameeyay dhanka garaaddaha ay bixiso UEFA wuxuuna haatan gaarey 5 isagoo ka yimi 4.5.
Atletico Madrid iyo Real Madrid oo reer Madrid ah ayaa habeen dambe ku bood boodi doona garoonka reer Milano oo dib u habeeyn dhinacyo badan ah lagu sameeyay.
Cusbooneeynsiinta oo bilowday 2012 ayaa waxaa dib u habeeyn lagu sameeyay coowska garoonka, musqulaha, caqabadihii ku hor gudbanaa daawatada oo la qaaday iyo 12 meelood oo dadku ku nastaan oo la sameeyay (sky lounges).
Guddi ka socda UEFA oo indha indheeyay ayaa sheegay inuu imtixaankii ku baasay iyadoo uu Gazzetta dello Sport uu werinayo inay heerkii garoonka kasoo qaadeen 4.5 oo ay ka dhigeen 5 xiddigood.
Kooxaha Milan iyo Inter ayaa doonaya inuu garoonku noqdo mid ay kusoo hiran karaan dadka caadiga ah iyagoo amaan dareemaya, isagoo ah garoonka ugu wayn Talyaaniga qaadana 85700 oo qof.
Jose Mourinho oo durba heshiis la gaaray saxiixiisa ugu horreeya ee Man United
''30 sano kaddib waxaa la gaarey xilligii aan iska tegi lahaa'' - Berlusconi